android ဖုန်းများအတွက် DC ကတင်ပေးသူ app ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » DC အဖွင့်တင် - အန်းဒရွိုက် Oreo စတိုင်, Fast & ရိုးရှင်းသော
DC အဖွင့်တင် - အန်းဒရွိုက် Oreo စတိုင်, Fast & ရိုးရှင်းသော APK ကို
DC အဖွင့်တင်ခေတ်သစ်ကို Android 8.0 Oreo နှင့် Android P ကို ​​launcher စတိုင်, သန့်ရှင်း & ရိုးရှင်းစွာဖွင့်တင်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ DC အဖွင့်တင်မှုကောင်းတဲ့ Android ကိုမူရင်းဒီဇိုင်းနှင့်စိတ်ကြိုက် features တွေရန်က Android အသုံးပြုသူများအများအတွက်အံ့သြစရာရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ☆ညာဘက်ယခုသန့်စင်, ပိုမိုမြန်ဆန်နဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ launcher ရယူပါ! ☆
•မူရင်း Launcher ကိုဒီဇိုင်း: အားလုံး Apps ကပ mode ကိုမျက်နှာပြင်ထုတ်ဖေါ်ရန်သင့်အားအထိုင်တက်ပွတ်ဆွဲပါ။
• App ကို Shortcuts: ကိုအသုံးပြုခြင်းက Android 8 ရဲ့ App ကို Shortcuts ကို Android 5.1 running ကိရိယာများပေါ်တွင်သို့မဟုတ်နောက်မှ။
•စမတ် App ကိုအံဆွဲ: ထိပ်မှာပြသမကြာမီက Apps ကပ! အလိုအလျှောက်မျက်နှာပြင်ကဆက်ပြောသည်အသစ်သော apps တွေအတွက် shortcuts!
•အလိုက်အိုင်ကွန်: Oreo running ဖုန်းများအတွက်ဇာတိအလိုက်အိုင်ကွန်ကိုသုံးနိုင်သည်။
• Google မှလျင်မြန်စွာ SearchBar ပေါင်းစည်းမှု!
•သတိပေးချက် Dots: အိုင်ကွန်တံဆိပ်များမဖတ်ရသေးသောအသိပေးချက်များကိုညွှန်ပြမှအန်းဒရွိုက် 6.0 အထက်ပြေးဖုန်းများအတွက်အပေါ်ဖွင့်ထားနိုငျသညျ!
•အပြည့်အဝဖုန်း Phablet ကိုနှင့်တက်ဘလက်ထောက်ခံမှု။
- Access ကိုချိန်ညှိမှုများ: ပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အချည်းနှီးသောအခန်းကအပေါ်ကို Long ကိုထိပုတ်ပါ
- Folders Create: Long က icon တစ်ခုကိုအသာပုတ်များနှင့်အခြားတဦးတည်းကိုကျော်ပါကဆွဲယူပါ။
- App ကို Options ကို: app ကိုရှေးခယျြစရာဝင်ရောက်ဖို့ icon များပေါ်တွင် Long ကကိုထိပုတ်ပါ။
တစ်ဦး icon ပေါ်မှာတာရှည်ကိုထိပုတ်ပါဆွဲနှင့်မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာခလုတ် "Remove" ကျော်အိုင်ကွန် drop: - ပင်မစာမျက်နှာ Screen ကနေ app များကိုဖယ်ရှားပါ။
ရှေးရှေးမင်္ဂလာပါ! ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးဗားရှင်းဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကျိန်းသေအနာဂတ်၌လမ်းကိုပိုပြီးအေးမြ features တွေထပ်ထည့်မယ်! သင်မြင်သောအရာကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်, လောကီပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ကြင်နာစွာကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုငါးခုကြယ်ပွဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ သငျသညျအခြို့သောအတွေးအခေါ်များနှင့်အကြံပြုချက်များရှိပါက dclauncher@thinkyeah.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်မသွားပါ
1 ။ အချို့ကိစ္စရပ်များကိုဖြေရှင်းပါ။
2 ။ မူရင်း launcher ကနေဖြတ်လမ်းနဲ့ဖိုလ်ဒါကိုကော်ပီကူးဖို့ပံ့ပိုးမှု
3 ။ သင့်ရဲ့ device ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် function ကိုထည့်ပါ။
DC အဖွင့်တင် - အန်းဒရွိုက် Oreo စတိုင်, Fast & ရိုးရှင်းသော
8.18 ကို MB